Google AdSense approve ရဖို့ အတွက်အထောက်အကူပြုသည့်နည်းလမ်းများ - Aung Hein The Blogger
Posted by aunghein July 24, 2018 in Burmese Blog
Google AdSense approve ရဖို့ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။
ဒီpost ကို ကျွန်တော် AdSense လျှောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးရေးထားတာပါ။
AdSense ကို ၂၀၁၅ လောက်ကတည်းကျွန်တော်စပြီးလျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာက Myanmar Celebrities website admin ကြီးကို အားကျပြီး လျှောက်ခဲ့ဖြစ်တာ။ သူနဲ့တွေ့ပြီးမှ AdSense ဆိုတာကို သိခဲ့တာပါ။
စလျှောက်တော့ blogspot website တစ်ခုထောင်ပြီး post ၁၀ ခုလောက် ဖန်တီးပြီးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းမှာနေတုန်းက လျှောက်တာပါ။ approved မရပါဘူး…ဘယ်ရမလဲ… post တွေအားလုံးက မြန်မာလိုရေးထားတာကိုး။ ပြီးတော့ website မှာ AdSene ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ Fiverr ကိုရောက်သွားတယ်။ Fiverr မှာ google Adsense approve ပေးမယ့် website ကို ၅ ဒေါ်လာနဲ့လုပ်ပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်။ Blogspot ကိုလုပ်ပေးတာပါ။ အဲ့ဒီမှာ သွားအပ်လိုက်တာ။ ၅ ဒေါ်လာ ပေးရတယ်။ တစ်ရက်ပဲကြာတယ်။ website တစ်ခုရလာတယ်။ English language post ၅ ခုတင်ထားတယ်။ နောက် ၃ လနေမှ လျှောက်လို့ လုပ်ပေးတဲ့သူကပြောတယ်။
အဲ့ဒီ website နဲ့ ၂ လလောက်နေတော့လျှောက်ကြည့်လုိုက်တယ်။ reject ပဲ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဆရာသမားက content တွေကို တခြားကနေ ကူးထည့်ပေးလိုက်တာကိုး….သူ့ ကို ပြန်ပြောတော့ သူက website design ပဲလုပ်ပေးတာ။ content က မင်းဖာသာပြန်ရေးရမှာတဲ့။ ဒါပေမယ့်သူဆီကဘာရလိုက်လဲဆိုတော့ Adsense သဘောကျတဲ့ website layout ရလိုက်တယ်။ blogspot နဲ့လုပ်ထားတာပါ။ အဲ့ဒီ backup layout လိုချင်ရင် ကျွန်တော့်ဆီတောင်းလို့ ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ၃ နှစ်လောက် AdSense ကိုမလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဒီ ၂၀၁၈ အစမှာတော့ ရှိပြီသား blogspot တစ်ခု (သက်တမ်း ၂ နှစ်ကျော်) ကိုသုံးပြီး AdSense ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ website မှာ ဟိုဘဲဆီကရတဲ့ layout ကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။ blogspot.com domain နဲ့လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ blogspot ကိုလက်မခံပဲ TLD (top level domain) တစ်ခုပြောင်းသုံးခိုင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် top level domain တစ်ခုဝယ်သုံးလိုက်ပါတယ်။
လျှောက်ထားတဲ့ကာလအတွင်း web ကို traffic တက်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ တစ်နေ့ ကို ၂၀၀၀ လောက် traffic ရှိပါတယ်။ ၅ ရက်အကြာမှာ AdSense approve ရပါတယ်။ Non hosted account ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ hosted account နဲ့ non hosted account ဆိုတာ ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ hosted account ဆိုတာက google products (blogspot, App, Youtube) တွေကိုသုံးပြီးလျှောက်ထားတဲ့ AdSense account ပါ။ Google product ပေါ်မှာပဲသုံးလုို့ ရပါတယ်။ non hosted account ဆိုတာကတော့ blogspot မဟုတ်ပဲ domain ၀ယ်သုံးထားတဲ့ website တွေကို approve ပေးတဲ့ account ပါ။ Ads code ထုတ်ပြီး ကြိုက်တဲ့ website မှာထည့်သုံးလို့ ရပါတယ်။
စာရှည်သွားပါပြီ။ အကျဉ်းပြန်ချုပ်ပေးပါ့မယ်။ AdSense approve ဖြစ်ဖို့ website ကို ဒါတွေပြင်ဖုို့ လိုပါတယ်။
(၂) TLD (top level domain) .com or .net သုံးသင့်ပါတယ်။
(၃) Content တွေအားလုံး own content ဖြစ်ရပါမယ်။ AdSense လက်ခံထားတဲ့ language သုံးရပါမယ်။အလွယ်ဆုံးက English language ပါ။ ကော်ပီမရပါ။ မြန်မာလိုမရပါ။
(၄) Niche ရွေးဖို့ လိုပါတယ်။ AdSense အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေပါတဲ့ content တွေမတင်ပါနဲ့။ Digital marketing Niche တွေအရမ်းများနေပါပြီ။ AdSense က approve မပေးတော့ဘူးကြားပါတယ်။
(၅) website ကို google search console မှာ submit လုပ်ထားပါ။
(၆) Traffic ကောင်းအောင်လုပ်ထားပါ။
(၇) website သက်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပြောကြသလို မကြီးဘူးလည်းပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော် အတိအကျမပြောနိုင်ပါ။
မေးချင်တာရှိရင် comment မှာမေးလို့ ရပါတယ်။
နောက်ရေးမယ့်ဆောင်းပါးက AdSense မလျှောက်ခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်တွေကိုရေးမှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တိုင်ပတ်နေတဲ့အချက်တွေပါ။
Post တင်တုိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Shana Mallick says:
adsense approveဖြစ်နိုင်တဲ့ website layoutမျိုးလိုချင်ပါတယ်ဗျ
Can I post with Burmese after approval ?
And how can I get approved with my Burmese content?
Approved web layout လေး မျှဝေပေးပါခင်ဗျာ